जगत कल्याणी पाथीभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, असोज २७/अक्टोबर १३को राशिफल « Pana Khabar
जगत कल्याणी पाथीभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, असोज २७/अक्टोबर १३को राशिफल
प्रकाशित मिति : Oct 13, 2017
समय : 12:09 am
श्री शाके १९३९ ,बि. स. २०७४ साल आश्विन २७ गते शुक्रबार इश्वी सन २०१७ अक्टोबर १३ तारीख कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथी ०७: ५१ बजे सम्म पश्चात नवमी तिथी चन्दमा कर्कट राशिमा सूर्य दक्षीणायन शरद ऋतु, श्रीराधाष्टमी प्राकृतिक विपत्ति न्युनीकरण दिवस – ज्यो. प. सरोज घिमिरे ।
मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला । बिलासीताका सामानको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ ।
पराक्रम बृद्धि हुने छ । मित्रजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । यात्रामा सामान्य झन्जट आउन सक्छ । मान्यजनको साथ छुट्नाले सामान्य चिन्ता सहनु पर्ला । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । आम्दानि बृद्धि हुने योग रहेको छ । कामको क्षेत्रमा समान्य ढिलाई रहन सक्छ ।
साहित्य संगीत क्षेत्रमा रुचि जाग्ने छ । नयाँ कार्यको थालनि ले मन प्रशन्न रहला । खानपानको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु होला । आजको लगानि भोलिका निम्ति फाईदा जनक हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धी समास्याले सताउन सक्छ । अरुको भर पर्दा कार्यक्षेत्रमा सामान्य अप्जस आउन सक्छ ।
पारिवारिक सुख प्राप्त हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । आम्दानिका बिभिन्न स्रोतहरु फेला पर्ने छन । मनोरञ्जनका श्रोत्र र साधनका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुनसक्ला । सामान्य यात्रा रहन सक्छ । भौतिक शुःख साधन प्राप्त हुनेछ । शारीरिक आलस्यले सताउन सक्छ ।
मनमा चन्चलताले बास गर्नेछ । खर्च बढ्ने योग रहेको छ । बिश्वासिलो ब्यक्ति बाट धोकाहुनाले गरिरहेको काममा बिशेष झमेला पर्न सक्छ । कुराकाट्ने ब्यक्तिहरुको कारण सामान्य चिन्ता बढ्न सक्छ । दाम्पति बिच सामान्य कलह रहने सम्भाबना रहन सक्छ ।
मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । बिद्या प्राप्ति योग तथा बौधिक बिकाश हुने समय रहेकोछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । पारीवरिक शुःख प््राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ
दिन मनोरञ्जनपुर्ण ब्यतित रहनेछ । पुराना मित्रहरु सगँको भेटले मनमा उत्साहा जाग्नेछ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीरहेको काममा बिशेष फाइदा मिल्ने छ । श्रम परीश्रमको राम्रो कदर हुने समय रहेको छ । सबारी साधन को प्रयोगमा ध्यान दिनु होला । यात्रामा सामान्य झन्झट रहन सक्छ ।
धनु राशि : ये , यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे
स्वास्थ सम्बन्धी समस्याले सताउनसक्नेछ । तपाईको बोलिको खराब अशर देखापर्नेछ । साझेदारी काममा भने मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । भोजभतेरमा सरीक हुने अबशर प्राप्त रहनेछ । सामान्य स्थान्तरणका कारण कार्य क्षेत्रमा साधारण झन्झट ब्यर्होनु पर्नेछ । कुराकाट्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ ।
मकर राशि : भो , ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि
मानसिक चन्चलताले सताउन सक्नेछ । सामान्य कार्यमा अधिक श्रम र समय ब्यतित हुन सक्नेछ । बिलासीताका सामानको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । जिबन साथीको सहयोगमा गरीएका ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । अन्य ब्यक्तिको पूर्ण बिश्वास नगर्नु होला ।
कुम्भ राशि : गु , गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द
प्रतिस्पर्धामा उत्रन तपाईको समय ले त्यति साथ दिने छैन । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । प्रेम सम्बन्धमा केहि सुधार आउने छ । ब्यापार ब्यवसायको निम्ति राम्रो समय रहेको छ । मित्रजनहरु बाट साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ ।
मनोरञ्जन तथा भोगबिलासको क्षेत्रमा मन जानेछ । सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ । सामान्य चोटपटक सहनु पर्ला । नयाँ कामको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ । बौधिक क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गर्ने छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ ।
पश्चिमा विश्व नै हल्लाउने हाम्रो “पूर्वीय सभ्यता”
बौद्ध धर्म दर्शनमा ”दोस्रो बुद्ध”को भ्रमबारे एक चिरफार
रामायणमा भगवान रामले किन आफ्ना दुई जुम्ल्याहा सन्तान लव-कुश माथी धनुष उठाउन खोजे ?
भगवान रामका भक्त हनुमानले किन र कसरी लंका जलाए ?
सन्तोषी माताको पूजा र ब्रत बस्नाले सुख,शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता छ